जनस्वास्थ्य विज्ञ डा रविन्द्र पाण्डेले कोरोनाको नयाँ भाइरसको बारेमा चलाईएको हल्लाका पछि नलाग्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक बेलायतमा देखिएको नयाँ कोरोना भाइरसका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिँदै डा. पाण्डेले यो कुनै नयाँ भाइरस नभएर कोरोना भाइरसको स्वरुप परिवर्तन अर्थात् म्युटेसन भएको बताएका छन् ।
आम सर्वसाधारणबीच नयाँ खतरा भाइरस आयो भन्ने जुन हल्ला चलाइएको छ त्यो सत्य नभएको बताउँदै डा. पाण्डे भन्छन्,–
‘बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरसबारे डर नमानौं । यो कोरोना भाइरस नै हो, अर्को नयाँ भाइरस हैन । भाइरसको स्वरूप परिवर्तन अर्थात म्युटेसन भइरहहन्छ । त्यहि क्रममा बेलायतमा स्वरूप परिवर्तन भएको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएको हो । पुरानो कोरोना भाइरसभन्दा यो ७० प्रतिशत बढी सर्न सक्दछ । उदाहरणको लागि पुरानो भाइरस कुनै समुदायमा एक हजार जनामा फैलिन्थ्यो भने यो ७० प्रतिशत बढी अर्थात १७०० जनालाई संक्रमण गराउन सक्छ ।
आफ्नो घरमा उपलब्ध पोषिला खाना खाने, घाममा बस्ने, दिउँसो ब्यायाम गर्ने ( जाडोमा मर्निंग वाक नगर्नु राम्रो ), तनाब नलिने, राति ८–९ घण्टा सुत्ने, मौसमी फलफुल खाने, औषधिसेवीले आफ्नो औषधि नछोड्ने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर आफ्नो नियमित काम गर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य र काम दुवै संगै जानेछ ।
गलत सुचना नै तनाबको स्रोत हो । तसर्थ आधिकारिक समाचार मात्र हेर्ने र पढ्ने, स्वास्थ्यकर्मीको कुरामा मात्र विश्वास गर्ने तथा नकारात्मक समाचार नहेर्ने गर्नु नै तनाब कम गर्ने मुख्य उपाय हुन् ।’